Chii chinonzi Bounce Rate? Iwe Unogona Sei Kuvandudza Yako Bounce Rate? | Martech Zone
Chii chinonzi Bounce Rate? Unogona Sei Kuvandudza Yako Bounce Rate?
Chitatu, December 9, 2020 Chitatu, December 9, 2020 Douglas Karr
Bounce rate ndeimwe yeaya maKPI ayo vatengesi vedigital vanoshandisa yakawanda nguva kuongorora uye kuyedza kugadzirisa. Nekudaro, kana iwe usinganzwisise zvizere kuti chii chinonzi bounce, unogona kunge uchikanganisa munzira yaunoedza kuzvivandudza nayo. Ini ndichafamba kuburikidza nedudziro yeye bounce rate, mamwe ma nuances, uye dzimwe nzira dzaungagadzirise yako bounce rate.
Bounce Rate Tsanangudzo
A dauka iri-peji peji chikamu pane yako saiti. MuAnalytics, bounce inoverengwa chaizvo sechiitiko chinokonzeresa chikumbiro chimwe chete kuseva yeAnalytics, senge kana mushandisi achivhura peji rimwe chete pane yako saiti obva abuda pasina kukonzera zvimwe zvikumbiro kuseva yeAnalytics panguva iyoyo.
Kuti tinyatsoyera chiyero chebhuremu, isu tinofanirwa kutora huwandu hwese hwemabhureki uye kubvisa kushanya kunongedzera kubva kubhulogi kune webhusaiti webhusaiti. Saka - ngatifambei mune dzimwe bounce zviitiko:
Mushanyi anogara pane blog blog, haafarire zvirimo, uye anosiya yako saiti. Ndiko kubhoikana.
Mushanyi anogara pane peji rekumhara obva abaya iyo yekufona-ku-chiito kunyoresa kune yako kunyorera. Izvo zvinovaendesa kune yekunze saiti pane imwe subdomain kana domeini inomhanya dzakasiyana Google Analytics maakaunzi. Ndiko kubhoikana.
Mushanyi anogara pane chinyorwa kubva pane yekutsvaga mhedzisiro apo peji rako rinosarudzwa zvakanyanya… kwezwi risingabvumirwe kune zvigadzirwa zvako kana masevhisi. Vanobaya bhatani rekuseri mubrowser yavo kuti vadzokere kumhedzisiro yekutsvaga. Ndiko kubhoikana.
Zviitiko Zvinogona Kuita Bounce Rates Zero
Bounce mwero inowanzoonekwa seyero inoratidza yeyekutanga-nguva mushanyi Kubatana pawebhusaiti… asi unofanirwa kungwarira. Heino mamiriro anogona kukushamisa iwe:
Iwe unogadzirisa analytics chiitiko pane peji… kunge bhatani rekutamba rinodzvanywa, scroll chiitiko, kana popup div inoitika.
Chiitiko, kunze kwekunge chataurwa se kusaita chiitiko, inyanzvi Kubatana. Vatengesi vanowanzo wedzera zviitiko mumapeji kuti vanyatsoongorora kuti vashanyi vari kudyidzana sei nezvinhu zviri papeji kana kana zvinhu zvikaonekwa pane peji. Zviitiko zviri kubatanidzwa, saka ipapo ivo vanoona bounce mitengo inodonha kusvika zero.
Bounce Rate Kusiyanisa Buda Mutengo
Usavhiringidze Buda Mutengo neBounce Rate. Exit rate yakanangana nepeji rimwe chete pane yako saiti uye kuti mushanyi akasiya iro peji kuenda kune rimwe peji (onsite kana kure). Bounce Rate yakanangana nepekutanga peji rinoshanyirwa nemushanyi mukati memusangano wavakatanga pane yako saiti… uye kana vakasiya saiti yako mushure mekushanya.
Heano zvimwe zvakasarudzika pakati pe Buda Mutengo uye Bounce Rate yeimwe peji peji:
Kune ese kuona peji kune peji, Buda Mutengo ndiyo muzana yaive iyo ekupedzisira muchikamu.
Kune ese zvikamu anotanga neiyo peji, Bounce Rate ndiyo muzana yaive iyo chete chimwe chechirongwa.
Bounce Rate peji rinogadzirirwa chete pazvikamu zvinotanga neiyo peji.
Kuvandudza Bounce Rate Inogona Kukuvadza Kubatanidzwa
Mushambadzi anogona kuvandudza yavo bounce mwero uye kuparadza kubatanidzwa pane yavo saiti. Fungidzira mumwe munhu achipinda peji pane yako saiti, achiverenga zvese zvemukati zvemukati, uye kuronga demo neboka rako rekutengesa. Ivo havana kumbobvira vadzvanya chero chimwe chinhu pane peji… vangosvika, verenga kuburikidza maficha kana mabhenefiti, uye ndokutumira tsamba kumutengesi kudzoka.
Ndohunyanzvi a dauka… Asi chaive chinetso here? Aiwa, zvirokwazvo kwete. Ndiko kunakidzwa kubatanidzwa! Izvo chete kuti zvimwe zvacho zvakaitika kunze kwekugona kwean analytics kutora chiitiko.
Vamwe vaparidzi vanogadzira zvisina mwero bounce mitengo kuti vataridzike zvirinani kune vanoshambadzira uye vanotsigira. Ivo vanoita izvi nekupaza zvirimo mumapeji akawanda. Kana munhu achifanira kubaya-6 mapeji kuti averenge chinyorwa chose, iwe wakabudirira kudzikisa yako bounce mwero uye nekuwedzera yako peji maonero. Zvekare, iri zano rekuwedzera rako rekushambadzira mitengo pasina kuwedzera chero kukosha kana kuedza kune mushanyi wako kana mushambadzi.
Iyi nzira ndeyekunyepera uye ini handikurudzire… kune vashambadziri kana kune vako vashanyi. Chiitiko chemuenzi wako hachifanirwe kunge chakatemwa nehuremu hwega.
Kuvandudza Yako Bounce Rate
Kana iwe uchida kudzikisa yako bounce rate zvinobudirira, pane nzira shoma dzandinokurudzira.
Nyora zvakanyatsorongedzwa uye zvakagadziriswa zvemukati zvinoenderana nezviri kutsvaga vateereri vako. Shandisa mazwi akakosha zvinobudirira nekuita imwe tsvagiridzo pane mazwi akakosha ari kudhirowa traffic kune yako saiti, wobva waashandisa mumazita epeji rako, zvinyorwa zvemashure, post-slugs, uye zvemukati. Izvi zvichaita kuti injini dzekutsvaga dzikunongedze nenzira kwayo uye unenge usisakwanise kuve nevashanyi vanogara panzvimbo yako vasingafarire uye vanorova.
Shandisa zvemukati zvinongedzo mukati meako zvemukati. Kana vateereri vako vakasvika kune yako saiti kutsvaga chaiko - asi zvirimo hazvienderane - kuva nezvimwe zvinongedzo kumatopiki ane hukama zvinogona kubatsira kuchengetedza vaverengi vako. Iwe ungangoda kuve netafura yeindekisi ine mabhukumaki ayo anobatsira vanhu kusvetukira pasi kune mamwe madutu kana misoro yenyaya (kudzvanya bhukumaki kuita).
Auto-gadzira zvakabatana zvakatumirwa zvinoenderana nekumaka kana mazwi akakosha. Yangu blog, ini ndinoshandisa Jetpack's Zvakabatana Zvinyorwa chimiro uye chinoita basa rakakura rekupa runyorwa rwezvimwe zvekutumira zvinoenderana nematagi iwe aunoshandisa pane yako yazvino post.
Uchishandisa Google Tag Manager, unogona nyore kukonzera kupururudza zviitiko mune peji. Ngatizvitarisei izvi ... mushandisi ari kupururudza kuburikidza peji iri Kubatana. Ehezve, iwe uchazoda zvakare kuongorora yako nguva pane-saiti uye yakazara kutendeuka metric kuona kuti chiitiko chinobatsira kune ako akazara zvinangwa.
Kubvisa Mabhureki Ari Chaiwo Engagement
Rangarira mamiriro angu pamusoro apo ini ndataura kuti mumwe munhu apinda saiti yako, verenga iro peji, wobva wabaya kune yekunze saiti kunyoresa? Iwe unogona kuita akati wandei zvinhu kuona kuti haina kunyoreswa seye bounce pane yako saiti:
Batanidza chiitiko nekudzvanya kweiyo link. Nekuwedzera chiitiko, iwe uchangobvisa iyo bounce kana mushanyi akabaya kwaunoda ivo. Izvi zvinogona kuitwa ne tinya-kufona kana tinya-ku-email zvinongedzo zvakare.
Wedzera iyo yekumusoro redirect peji. Kana ini ndikabaya nyoresa uye wozomhara pane imwe peji remukati iyo inoteedzera kubaya uye kuendesa munhu iye kune iro rekunze peji, iro rinozoverenga seimwe peji rekutarisa uye kwete bounce.
Wongorora Yako Bounce Rate Maitiro
Ini ndinokurudzira zvikuru iwe kuti utarise pane bounce rate pamusoro penguva pane kunetseka nezve chiitiko cheicho pano neapo. Uchishandisa iwo maitiro ari pamusoro, iwe unogona kunyora shanduko mukati me analytics wobva waona kuti yako bounce mwero iri kuvandudza kana kuti iri kuramba ichiwedzera. Kana iwe uri kutaurirana nevane chekuita navo pakubhadharisa mwero seKPI, ini ndinokurudzira kukurudzira kuita zvishoma zvinhu mukuita.
Taura kuti chii chinonzi bounce rate kune vanobatika.
Taura kuti nei mabhureji emitengo angave asiri chiratidzo chakanakisa munhoroondo.
Taura yega shanduko inoshamisa mu bounce rate paunowedzera zviitiko kune yako saiti kuti uone zvirinani kubatanidzwa.
Cherekedza yako bounce mwero maitiro pamusoro penguva uye enderera nekugadzirisa yako saiti dhizaini, zvemukati, kufamba, kufona-kune-chiito, uye zviitiko.
Chinokosha ndechekuti ini ndinotoda kuti vashanyi vapinde peji, vawane zvese zvavanoda, voita kuti vandibatanidze kana kuenda. Mushanyi asina basa haasi mabhureni akaipa. Uye mushanyi akavimbiswa uyo anoshandura asina kumbosiya peji ravari haazi akaipa asina kunaka, futi. Bounce rate ongororo zvinongoda rimwe basa rekuwedzera!
Tags: Analyticsdaukabounce rategoogle analytics
SlickText: Ndezvipi Zviripo Uye Kubatanidzwa Kugona KweSMS Kushambadzira Platform?
Maitiro Ekuti Vaparidzi Vanogona Kugadzirira Iyo Teki Stack Kuti Vasvika Kune Anowedzera Akaparadzaniswa Vateereri
Nov 29, 2009 na1:30 PM